Ubomi bomdlali waseRashiya omangalisayo u-Igor Petrenko uzaliswe ngokunyuka nokuhla. Yonke into eyenzekayo ebomini bakhe - ixesha elonwabileyo kunye neentlungu ezingonwabanga - umdlali wecala uchaza iimpawu zobuntu bakhe. Njalo xa ehlala enzulu kwindima ephinda iphinda ephindaphinda isimo sakhe somntu. Ngoko ke, ubomi bomntu bomntu u-Igor Petrenko luyi-kaleidoscope engalindelekanga yeziganeko ezinonwabo neziziwayo. Umtshato wokuqala, umonde omkhulu, umtshato omkhulu, uthando lukabawo - abalandeli banolwazi oluninzi lokucinga ngalo.
Iqhawe elihle kakhulu kwi-movie ekubuntwaneni nasebuntwaneni akuzange kube njalo. Ukukhula kwakhe kwawa kwi-90. Umntu onqabileyo, owamthiya kakhulu isikolo, wakhula entendelezweni, kwaye, njengabantu abaninzi kwixesha elixakekayo, babefuna ukufumana imali kwaye babonakale bepholile. Umnqweno onjalo akazange uholele ekuhle-ukususela ngo-1992 ukuya ku-1993 wachitha ejele intolongo ngamacala okubulala. Icaleni lenzeke emva kweminyaka emine emva koko wagweba inkwenkwezi yangomso ukuya kwiminyaka eyisibhozo ekuvavanyweni, kwaye ezintathu zazo azichitha ekuhlolweni.
UPetrenko akazange acinge ngezenzo zokufunda. Khetha umsebenzi wokudala u-Igor wancedisa loo matyala-wabona isivakalisi sokwakheka kwi-Chip kwaye wagqiba ekubeni azame impikiswano. Yaphuma ngokugqibeleleyo-indoda eyilungelelwanga ilingene. Emva kwesikhashana uyavuma ukuba umphathi wecandelo lezakhono wayemthathele kwizifundo zakhe zokuqala. Yaye yilapho eqonda ukuba akukho nto eyenzeka ngengozi.
Irina Leonova. Umfazi wokuqala uPetrenko
Baye bafundisana ndawonye kwikhosi efanayo, babenobungane kwaye bancedana. Ubuhlobo bakhawuleza buba yintliziyo enamandla, kwaye emva kokuphela kweSplint, u-Irina Leonova waba ngumkaPetrenko. Bachitha ixesha elide bashada, kodwa bahlala ndawonye iminyaka emine elukhuni kwaye bahlakazeka ngeendlela ezahlukeneyo, baxelele i-press emva kwenguqu yabo yomtshato.
Igor Petrenko: usapho
Ekuqaleni komsebenzi wakhe, umfazi wakhe uPetrenko wayeyindlalifa - wathola inxaxheba ka-Elena Budyagina kwifilimu yoonyana bakaArbat. Yaye indima ka-Alexander Pankratov ayivunyelwanga nguPetrosko, kodwa ngu-Evgeny Tsyganov owayenomdla. Phakathi kwababini abalingisi, inzondo ebangelisayo yavutha, kwaye emva kweminyaka emibili uLeonova washiya uPetrenko waya eTyganova. Ewe, indoda eyashiywe kamva yazisa isizathu sayo sokuqhawula umtshato. Kwaye isizathu sokuba uEkaterina Klimova.
Igor Petrenko no-Ekaterina Klimova. Hollywood Passion
Kwi-saga "iWindows Windows" badlala isibini esitshatileyo sothando. U-Ekaterina Klimova kunye no-Igor Petrenko baye basebenzisa inxaxheba abayithandana ngayo, njengabalinganiswa babo. Kodwa bobabini babengenasiphelo kwaye "banqanda" uthando lwabo unyaka wonke. Kuba wonke umntu kulo nyaka kwakunzima: ukuphoxeka, ukwesaba, ithemba, ukuphelelwa lithemba. Kodwa ekugqibeleni, uKlimova wabaleka kumyeni wakhe ... into efanayo yenze umfazi ka-Igor Petrenko.
Kwaye ibali lothando laqala iminyaka elishumi. Kwaye kweli bali kwakukho konke: iimbandezelo zeShakespearean, kunye nolonwabo olumnandi, kunye nokuzalwa koonyana abathandekayo, kunye nomdlalo kuluntu, kunye nomona wabantu ababi, kunye nomsebenzi odibeneyo kwiifilimu, kunye noyiko nentando eLas Vegas. Okugqibela, ngokwemaphephandaba, kwaye yayiyimbangela yokuqhawula umtshato kaCatherine Klimova no-Igor Petrenko. Ngethuba lokukhangela ifilimu kwisixeko sezono - iLas Vegas - iKlimova yajika imfutshane kunye nomdlali weqela laseCentral. UPaparazzi wathumela ividiyo kwi-intanethi "ukuwa" komfazi wakhe uPetrenko. Kwaye kwintlekele yakhe, indoda ekhohlwayo yambona.
Zonke iifestile zabukela iindaba ezizayo kwaye zilindele ukuba isibini sitshintshe ubunzima bentsapho kunye nokugcina umtshato. Bazama, kodwa ekugqibeleni akukho nto eyenzekayo. Kwaye ngoJuni ka-2014 isibini esihle seenkwenkwezi saqhekeza, iminyaka elishumi abalandeli bavuyiswa ngothando oluhle, okokuthi, njengoko kwakubonakele, kwakukho kuphela kwiifoto ezimnandi. Kwaye emva kwesibhakabhaka esikhanyayo kwakukho iingxaki ezifana neenkulungwane zeentsapho ezingezizo.
Ubomi bomntu siqu ka-Ekaterina Klimova ufunde apha .
Igor Petrenko kunye nentombi yakhe entsha uChristina Brodskaya. Ubhedu obuhlaza?
Emva kokuhlukana neKlimova, uPetrenko washesha wafumana intombi entsha. Waba ngumdlali wama-24 ubudala uKristina Brodskaya. Kodwa u-Igor Petrenko kunye nentombazana yakhe entsha zangeziinyanga ezintandathu abazange bavakalise ulwalamano, de kube baxelelwe malunga noshishino olungumntu wonke. Inkwenkwezi encinci ayibonakali rhoqo kwiintlanganiso zentlalo, kwaye ayikuthandanga amanethiwekhi amaninzi asekuhlaleni. Ubomi bakhe abucala bufihliwe ekuhloleni amehlo.
Esi sibini asinakukhawuleza ukwabelana kunye nabalandeli kwiintlanzi zobudlelwane babo. Kodwa ke wakwazi ukufumanisa ukuba abadlali abathandekayo ababini badibana eSt. Petersburg, apho uChristine evela khona. Kwaye ngenxa kaGigor wafaka umculi u-Artyom Krylov, owayedibene naye iminyaka emininzi.
Bobabini uPetrenko noBrdskaya bakholelwa ukuba ulonwabo lokwenene luthanda ukuthula. Kodwa ukuthula kwenkwenkwezi yeenkwenkwezi kuya kuphupha kuphela. Indoda enhle kunye neetalente iyaqhubeka ibe ngabalandeli abathandekayo basekhaya, obomi babo bubukelwa ngokubanzi ngamawaka abalandeli.
Abantwana bakaGgor Petrenko. Oonyana ababini kunye nentombi yentombazana
Umtshato kunye no-Ekaterina Klimova wanika umlingisi onyana ababini - uKorney noMatvey. NgoDisemba 2014, uKhristina Brodskaya wazala intombi ka-Igor Petrenko eyelinde ixesha elide. Omnye wabazali wayinika igama lakhe, waza waba nguSofia-Carolina. Intombazana encinane ihamba nabazali be-stellar yonke indawo, kwaye bobabini banandipha injabulo.
Landela iindaba zakutshanje zobomi buka-Igor Petrenko nathi.
UAndrei Udalov (umzukulu kaAndrei Mironov) - umboniso omtsha we-cinema yaseRashiya
I-Yegor Creed yashintsha njani isithombe ngaphambi kokuba emva kokuba umculi athandwe
Baye bagqoka njani kwaye baqeqesha kumaxesha amandulo?
Iziqhamo ezingaqhelekanga zaseThailand
Gcoba ukusilalisa - uncedisi onokwethenjelwa ekulweni ne-cellulite
Iphupha lezinyo ezinomsoco - i-pancake ngobisi olunamanzi, zokupheka kunye nesithombe
Indlela yokucoca umzimba emva kokuthatha i-antibiotics
U-Alla Pugachyova wathenga indlu entsha kumntakwabo
Ndiyakuvuyela ngokuzalwa kwakho kwentombazana
Ikhukhamba i-Gin ne-tonic
Kulebyaka kunye neklabishi
Ukunyumba kwama-Creole bamboo: izibonakaliso, iinkqubo, ukuchasana